Igor Lebedev wazalelwa emkhayeni osopolitiki kanye ososayensi Septhemba 27, 1972 ku-dolobha yaseRussia. Kusukela ebuntwaneni, lo mfana zihlakaniphile, ungalokothi neze ezidingekayo. Ngangizibuza izinto eziningi abangane. He is an ingane kuphela, ngakho egcwele uthando wathola, naphezu kweqiniso lokuthi abazali bakhe ngabantu abadumile kakhulu futhi umatasa.
Uyise - sezombusazwe owaziwa, owadala omunye amaqembu athandwa kakhulu eRussia, uVladimir Volfovich Zhirinovsky, endikimba Liberal Democratic Party. Lapho Igor wayeneminyaka eyishumi nesishiyagalombili ubudala, uyise unqume ukuthi indodana yakhe kufanele uthathe igama umama igama likayise akazange akuvimbele ukukhandwa abasha amasekela esizayo ukuqala kokusetshenziswa kwezinhlelo zabo. Kufanele kuqashelwe ukuthi isinqumo Vladimira Volfovicha kwakuhluke kakhulu efanele. Igor Lokhu isixazululo uncika amandla akhe akasebenzisi ithonya kayise ezimpilweni zabo. Futhi into kuphela kuyo ukuthi konke kuhamba kahle ekuphileni Lebedev wenze yayo.
Umama Galina Lebedeva wanikezela ukuphila kwakhe nemisebenzi ucwaningo emkhakheni wesayensi yezinto eziphilayo, utlole ezingaphezu kweyodwa mqondo, ngisho waba wabaholi wesayensi.
Ngo-1995, Lebedev baba ngakwesokunene sikayise. Ngaphezu kwalokho, uqondisa inhlangano osopolitiki ezisencane Liberal-Democratic Party yase-Russian Federation.
Ngo-1996, ngibalekela State Duma kwamaphini, uthola okhethweni, kodwa hhayi ukuthola isilinganiso esifanele amaphesenti wamavoti. Ngawo lowo nyaka agcine Legal Academy futhi wathola i-diploma abomvu. Sekuthanda uchwepheshe emkhakheni wokuqulwa kwamacala ezinkantolo. Ngenxa yalokho, ukhetho uwela Duma State ezisuka uyise. UVladimir Zhirinovsky uthola okuthunyelwe sobubi-noSomlomo Duma State, futhi indodana yakhe waba umholi we the Liberal Democratic Party ngukumkani esikhundleni sakhe. Futhi ngo-December 2007, Igor Vladimirovich Lebedev uthola isimo iphini. Wabuye iba PhD in kwabantu, PhD emlandweni.
Igor Vladimirovich Lebedev, ogama umndeni liqukethe abantu abane, washada Ludmilla enhle, obuye PhD in eziphilayo. Ngo-1998, wazala amadodana amabili - twins kuSasha Serezhi Lebedevyh. Igor indoda nomndeni omkhulu, ubaba omuhle. Zonke ngesikhathi sakhe sokuphumula yena ayehlukanisele umndeni.
iphupho Lebedev, njengoba Kwathi ngemva omunye interview - ukuthi abe ngumengameli.
indodana Zhirinovsky sika has umhlaba e Penza, eMoscow, Pskov. Imizi eminingi kanye amafulethi kulo lonke elaseRussia. Ungumnikazi izimoto ezimbili. Ingabe ezinonileyo nawo wonke umkhaya wakhe, futhi inengxenye enkulu ukwabelana VTB Bank.
Igor Vladimirovich Lebedev nomkakhe njalo livela emicimbini yomphakathi - ke uthi uyaziqhenya umkakhe.
Imiklomelo nezinye impumelelo
Lebedev ngokuphindiwe yaklonyeliswa futhi has umklomelo angaphezu kwelilodwa. 5 Agasti, 2011 Igor Vladimirovich Lebedev wathola Order Ukuhlonishwa ngokubamba iqhaza empini ngenxa kanembeza futhi ngekukhutsala emphilweni yezwe. Juni 12, 2013 yena yanikezelwa Order of Good umsebenzi asebenzayo wokudala.
Julayi 25, 2006, Lebedev waklonyeliswa ngendondo "Order of Merit ngokuba Motherland» II degree - umsebenzi okahle.
Okthoba 21, 2009 yena yanikezelwa i-diploma zokuhlonipha kaMongameli Russia ezikaqedisizungu. Ngaphezu kwalezi, it has eziningi nezinye ohloniphekile ngawe.
Phakathi imisebenzi yakhe yezombusazwe Lebedev Igor Vladimirovich, ogama isithombe ebonakala ngokuphindiwe phambili ekukhulumeni kwabezindaba, hhayi kanye senziwa ibulala amahlazo wako wawuvala izindlebe, nakulokhu okulotshiwe kule emaphephandabeni kuthelevishini kubika.
Okwamanje ophethe isikhundla iPhini likaSihlalo we Duma State. Lebedev kubhekwe sezombusazwe ozalwa, isikhundla sakhe Duma State, uzenzé. Ubamba lichaza zonke ukhetho, asikho isikhathi kwaba umqalisi kokuchitshiyelwa imithetho. Omunye izichibiyelo wethulwa Criminal Code. Isihloko isichibiyelo kwaba ukuthola amanzi amponjwana ngesikhathi beshayela. Lebedev owawuqondene kokuba bancishwa amalungelo adingekayo ngokushesha. Wabuye iqhaza emisebenzini ucwaningo, isekela ososayensi abanekhono abasha owabhala mqondo, okuyinto uvikela ngempumelelo.
Igor Vladimirovich Lebedev - Rounder, akumangazi ukuthi kuyinto isithombe amaRashiya amaningi.
Boris Vsevolodovich Gromov. AmaSoviet nasemakamu Russian nomholi wezempi sezombusazwe
Kwazalelwa Putin V. ubani abazali bakhe kwakunguMariya?